Qoor qoor iyo Deni oo la filayo in ay Gaalkacyo ku kulmaan - Tilmaan Media
Qoor qoor iyo Deni oo la filayo in ay Gaalkacyo ku kulmaan
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa xalay ay ku wada hoydeen Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, iyada oo la filayo inay wada kulmaan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa la hadal haayay in labada Madaxweyne ay wada kulmi doonaan,iyaga oo ka wada hadli doona arrimo muhiim.
Qodobada ugu muhiimsan oo ay labada masuul ka wada hadli doonaan ayaa waxaa kamid ah Amniga Magaalada Gaalkacyo, la dagaalanka Al-Shabaab iyo iskaashi la xiriira ka hortegida Colaad Beeleedyada ka dhaca degaano ka tirsan Gobolka Mudug.
Amniga Magaalada Gaalkacyo ayaa aad loo adkeeyay, iyada oo mas’uuliyiinta Maamulada Galmudug iyo Puntland ay la kulmi doonaan qeybaha kala duwan ee Bulshada Magaalada Gaalkacyo.
Maamulada Puntland iyo Galmudug oo deris ah ayaa waxaa larajaynayaa in uu u billawdo xiriir cusub oo wada shaqeyn ah, kaddib isbadallada maamul ee ka dhacay Galmudug.
WHO oo sheegtay in kiisaska “Covid-19” ay dhowaan gaari doonaan 10 milyan